कथा : मास्टर र कुखुरो
एकजना साथीको घरमा संयोगबस श्राद्धको दिन पुगेछु । श्राद्ध खान पाइयो । अचार, पुरी, तरकारी, दाल भात, दही, फुरौला आदि । साथी पूर्व मास्टर थिए, म पनि त्यस्तै । साथीले बहालवाला मास्टरलाई सम्झे । खबर गरेर श्राद्धको अचार, पुरी फुरौला चखाऊँ भनेर । तर, मास्टरको बाले प्रतिक्रिया जनाइहाले, ‘मास्टरहरु आउँदैनन्, उतै कुखुरा खाएर ढाडिएका होलान्, के आउँथे ।’
उनको कुरा सुन्दा अलिअलि हाँसो उठ्यो र विगतको सम्झना पनि आयो । आफूले पनि कहिलेकाँही कुखुरा खाएको । तर, ढाडिने गरी त कहिले पो खाइयो र । यत्तिकैमा बहालवाला मास्टरको सम्झना आयो । पूर्व मास्टरको बाले भनेजस्तै ढाडिने गरी कुखुरा खान सिङ्गासिङ्गै बडा–बडा कुखुरा ढाल्नुपर्छ भन्ने भनाई । जाबो एउटा कुखुरो काटेर आठ दश जनाले खाँदा कति ढाडिए होलान् ?
तर, ति मास्टरको बाबुको मनमा भने किन त्यस्तो धारणा बसेको होला ? मास्टरको बाले सम्झाईदिँदा मास्टरहरुसँगै कुखुराहरुको यादको ओइरो मनमा लाग्न थाल्यो । मास्टरहरु प्रा.वि.का, नि.मा.वि का ठिटा मास्टर, बुढामास्टर, अधवैंशे मास्टर आदि । मिसहरु भर्खर जागिरमा प्रवेश गरेका, पढाउँदा पढाउँदै थाकेका । त्यस्तै कुखुराहरु पनि सम्झँदै गईयो । आफू वहालवाला मास्टर हुँदा कस्ता–कस्ता खाईयो र पूर्व मास्टर बनेपछि साथिहरु ईष्टमित्रले कस्ता–कस्ता र कत्रा–कत्रा खुवाए । काला, राता, सेता छ्यासमिसे कलर भएका आदि । तर कहिले काँही मात्र खाईयो पहिले पनि । अहिले पनि सधैं कहाँ पाउनु । तर हाम्रा पूर्व शिक्षकका बा र अन्य गाउँलेको धारणा यो छ कि सधैं मास्टरहरु कुखुरा खान्छन् ।
सम्झदै गर्दाखेरी पुरानो कुराको याद आयो । हामीलाई क, ख, ग सिकाउने गुरुहरु लुङ्गी लगाएर स्कुल जान्थे । विद्यालय गएर हाजिर साजिर गर्ने दाँत–साँत राता निला जाँच्दथे । होमवर्क हेरे पछि ठिटाहरुलाई दुनोट वा कक्षा गीत गाउन खेताला लगाईएको एक छिन पछि हराउँथे । एक दिन एक जना बुढा बाले सोधे कि तिमिहरुको सर कहाँ जान्छन् थाहा छ ? हामीले थाहा नभएको बतायौं । बुढो बाले भने सर कुखुरो काट्न पसलमा गएको बताए । हामीलाई पनि चाँसो लाग्यो, कसरी कुखुरो काट्दा रहेछन् सरहरुले । दुई तीन जना मिलेर लुसुक्क गइयो पसलतिर, घर जानेभन्दा उल्टो बाटो परे पनि । सरहरु साँच्चै रातो भाले भुत्लाउँदै रहेछन् । हामीलाई देख्नेवित्तिकै गाली गर्दै भने, ‘ए ! भुरा हो भाग ।’ हामी ठाडो पुच्छर लगाएर कुलेलम ठोक्यौं र सँगै थाहा पनि पायौँ कि मास्टरहरु कुखुरा खाँदा रहेछन् ।
म एउटा मा.वि. स्कुलमा मास्टर जागिर खाँदाको कुरा हो, हामी वार्षिक परीक्षाको रिजल्टको तयारीमा थियौं । कामको लोड पनि चर्कै थियो । विद्यार्थीका प्राप्ताङ्कहरुलाई रजिष्टरमा व्यवस्थित ढंगले राख्ने । पहिलो, दोस्रो, तेस्रो कक्षा १ देखि १० सम्मको काम कसिकसाउ थियो । यसै अवस्थामा एक दिन विद्यालयका सरहरुबाट कुखुरा खाने प्रस्ताव आयो । हेडसरले त्यो प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार गरेपछि कुखरो खोजि कार्यक्रमको लागि मैले नियुक्ति पाएँ । दुईवटा राता भालेको खोजिमा एक्लै गाउँ पुगे । त्यहाँ आठ नौ महिना छाडा लगाएर पालेका दुई वटा राता भाले छानियो । कुखुरा धनी सरहरुलाई खुब आदर गर्दा रहेछन् । मास्टरको मोलमा किनेर चलेँ म पनि स्कुलतिर ।
बाटामा मैले एक जना सरलाई भेटें उहाँ कुखुरोसँग मोलेर खान चिउरा लिन आउनु भएको थियो । उहाँले सोध्नुभयो कतिमा किन्यौं ? मैले भने एकसय पच्चीसका दरले । उहाँले जिब्रो काढ्नुभयो । मलाई डर लाग्यो की भाले महंगो भयो भनेर । तर उहाँले भन्नुभयो मैले भए यी भाले दुई–दुई सय घटी मास्टरहरुको पेटमा पार्दै पार्दिन थिए । तिमी सोझा रहेछौ । आदी सस्तो ल्याएर तिमिले भाउ बिगारेउ । त्यसो होइन, हामी दुईजना मिलेर नाफा खाऔं । स्कुलको पैसा जाने त हो नी आज त ।
चार सयमा किनेको भनौं नाफा आदि÷आदि पारौं । मैले उहाँको कुरा बुझें कि कुखरा खरिद कार्यक्रममा नियुक्ति पाए आदि नाफा खानु हुँदो रहेछ सरले । मैले उहाँको कुरा मानिन । नाफै खान परे पनि किन उहाँलाई पनि खुवाउनु सित्तैमा आदि । म एक्लैले खाने अधिकार सुरक्षित भएपनि आफ्ना सरहरुलाई भुराहरुसँग उठाएको फिबाट सुपथ मूल्यमै खुवाईदिऔं जस्तो लाग्यो । र जवाफ दिए, ‘मचाँही नाफा खान्न तपाईलाई पनि खुवाउदिन गुरु ! बरु चिउरामा सकेजति नाफा खानोस् म हल्ला गर्दिन ।’ सर हाँस्नु भयो अनि दुबै जना लाग्यौं स्कुलतिर ।
पाले दाइको मद्दतले कुखुरा खुईल्याएर भुटियो । भान्से लाग्ने बेलामा चार÷पाँच जना सरहरु भइ कुखुरो भुट्दा÷भुट्दै एक÷दुई पिस चाख्दै जाने क्रम चल्यो । नुन, मसला, पिरो र काँचो पाको के छ ? बुझ्दा बुझ्दै आदि खतम् । यसै समयमा हाम्रा हेडसर मासु पकाई कार्यक्रम स्थलतर्फ लम्किएर आउन लागे जस्तै भान हामीलाई लाग्यो । मुखभरीको मासुको बुजो के गर्ने ? हामीलाई फसाद प¥यो । हत्त न पत्त स्टोर कोठाभित्र छिरेर मक्ल्याक मुक्लुक चपाएर चुलो तर्फ आएको त हेडसर आएकै होइन रहेछन् ।
एक दिनको कुरो हो मेरो गाउँको नि.मा.वि स्कुलमा जापानिज नागरिहरु आए । उनीहरुले विद्यार्थीहरुको लागि कापी, कलम, खेलौना चक्लेट र अन्य उपहारहरु तथा शैक्षिक सामग्रीहरु ल्याई दिए र विद्यालयमा रात बिताउने ईच्छा व्यक्त गरे । उनीहरुको सत्कार विद्यालयले लोकल कुखुरा र लोकल चामलको भातले गर्ने सुर कस्यो । त्यसै अवसरमा सबैजसो सरहरु समितिहरु म जस्तो भाग्यमानीले पनि लोकल कुखुरोको स्वाद लिन पाइनेमा मनमनै दंग थियौं । पाँच वटा लोकल कुखुरो मगाईयो । मैले जापानिजको लिडरलाई सोधें पिरो कत्तिको खाइन्छ ? उनले भने पिरो त नभए पनि हुन्छ, हाल्नु नै हुन्छ भने अलिकति मात्र ।
मैले भान्छेहरुलाई पिरो थोरै राख्न भनें र हामी जापानिजहरुसँँग गफ गर्दै रह्यौं । केहि छिन पछि सरहरुबाट मलाई बोलावट भयो, कुखुराको मासु चाख्नकोे लागि । म जानुभन्दा पहिला नै मेरो नाममा चाख्नेहरुले दुई प्लेट जति हजम पारि सकेछन् । मैले एक चोक्टा सुघ्न नै नपाई, तेस्रो प्लेट मगाईयो र चाख्नेहरुले भने मासु चाख्न बोलाएको कति गफ गरेर बसेका बुढा । एउटा चौटा मासु मुखमा के हालेको थिएँ आगो जस्तो पिरो । मैले भान्से सरहरुलाई भने किन यस्तो पिरो हालेको ? खाँदैनन् जापानिजहरुले । ‘उनीहरुले भने कि जापानिजहरुले सि सि गर्दा गर्दै हामीले काम खत्तम पारौंलानी किन चिन्ता गर्नुहुन्छ’, चाख्न तम्सिएका सर बोले ।
खाना खान बसियो । मैले जापानिजको कल्चरबारे सुनेको थिएँ । तपाईले अस्ति बनाएको खाना कति मिठो थियो भनेर, पछिसम्म भनिरहन्छन् रे । आजको खानाबारेको प्रतिक्रिया बुझ्न खोजें । खाना कस्तो लाग्यो ? मलाई उनीहरुले धेरै मिठो छ भन्छन् भन्ठानेको थिएँ तर, उनीहरुले भने कस्तो पिरो हालेको ? मुखैमा लान नसक्ने । मैले साथीहरुलाई भन्दै गर्दा सि सि गर्दै हाँस्दै लोकल कुखुरा बजाईसकेछन् । तपाईले थाहा पाई हाल्नु भयो यी मास्टरहरुले लोकल कुखुराको माया कति गर्दा रहेछन् ।
एक दिनको कुरा हो म मेरो जेठान पर्ने दाजुसँग बाघखोरको लेकको बाटो ससुराल जाँदै थिए । मेरो ससुराली विदुर नगरपालिकामा पर्छ । बाघखोरबाट २ घण्टा ओरालो बेसीमा । बाटामा एकजना तराई बासी मास्टर बाघखोरको स्कुलमा पढाउन आउँदै थिए । जेठान पर्नेले नमस्कार ठोक्दै प्रस्ताव राखिहाले, ‘सर आज स्कुल सिस्कुल जान पर्दैन ।’
दाजुभाइ भेट भएको बेला एउटा भाले मगाउनुहोस्, त्यसलाई भुटौं, चार घण्टा हानौं कलब्रेक । सरले यो प्रस्तावलाई सहर्ष स्वीकार गरिहाले । स्कुलभन्दा केही पर सरको खाजा खाने अखडामा हामीलाई लगियो । एउटा रातो भाले मगाएर भुट्न एकजना तामाङ दाइलाई अडर दिए सरले । मेरो जेठान पर्ने सर र हरु दुईजना भिडे बास्सा फुकाली खेल्न । बे्रक हान्दै ओसिएको चिउरासँगै लोकल कुखुराको एक दुई पिस यसो निल्दै थियौं । मलाई भने चाँडो ससुराली पुगेर आराम गर्न मन लागेको थियो । जेठानलाई कहिले रहर पुग्ने होइन । आफूलाई भने मनमनै पट्यार लागिसकेको थियो ।
मास्टर साहेब चिउरासँगै लोक कुखुरा चपाउँदै मात्र के थिए एक हुल बच्चाहरु सर खोज्न आइपुगिहाले गुरुरु.. । खुट्टाहरु पटपट फुटेका घाँटीभरी मएलै मएल । जिग्रिङ्ग कपाल धुस्रफुस्र मुख । बच्चाहरुले सरलाई भने ‘ओइ सर, हाम्रो हाजिर गर्न पर्दैन ? दिनभर तास हानेर बसिरहने हो ?’ मैले ति बच्चाहरुलाई हेरें र उनीहरुलाई पढिहालें कि हाम्रो देशको गाउँ र सहर दुर ठाउँमा रहेको स्कुलको अवस्था विद्यार्थीका अभिभावहरुको चेतना, शैक्षिक संघसंस्थामाथिको सरकारी निगरानी, शिक्षकको काम कर्तव्य र जिम्मेवारी आदि । सरले च्याँठिदै जवाफ दिए, ‘ओई भुराहरु चल घरतिर भोली १० बजे दुई दिनको हाजिर एकैचोटी हुन्छ ।’ मैले सरको अनुहार हेरे र फेरि विद्यार्थीहरुको अनुहार हेरेर अनुमान गरे, कि भुराहरुले एकछिन् चकचक गरे होलान, एकछिन् धुलोमा कुस्ति खेलेहोलान्, अनि टेवल कुर्सी आदिमा, बेन्चको भाँचिएको खुट्टाले ठ्याक–ठुकठुक पारे होलान् । एक छिन् साथी साथीको बाऊको गाली गर्ने नाउँ काडेर गाली गरे होलान् वा धुलोमाटोले एक अर्काको मुखमा छ्याप्ने खेल अन्त्य भएपछि घर जान जाँगर नलाग्नेहरु सरको खोजीमा आए होलान् । जे होस गाउँका गरिब जनताले छ महिना ÷एक वर्ष छाडा लगाएर पालेका कुखरा चाँही तह लगाउउँदा रहेछन् यी सरले, भन्ने सोचेर जेठानलाई उठाउँदै भने ‘अब अबेर हुन्छ चलौं !’ पछि भेटौंला भनेर लागियो बाटो ।
यसरी विभिन्न समय, स्थान, समारोह, भेटघाट आदिमा कुखुरो काट्ने कार्यक्रमले गर्दा मेरो पनि जिब्रो भेट्टाएसम्म लोकल कुखुरो खोज्न थाल्यो । मैले मास्टरी जागिर छोडेर नयाँ नेपाल बनाउन भनेर जनयुद्ध नाम राखिएको संघर्षमा होमिएको बेलामा पनि विभिन्न ईलाकाहरुमा कुखुरोसहितको भोजबाट स्वागत पाईनाले मेरो जिब्रोले स्वाद बिर्सिएन । यदि कुनै ईलाकाले कुखुरो खुवाउन नसके यो त कस्तो बैष्णवहरु बस्ने ईलाका रहेछ ? भनेर प्रतिक्रिया पोख्थे साथीहरु ।
एक दिन मेरो भाइ पर्ने मास्टरले विद्यालयमा हुने खुकुरा खाई कार्यक्रमको लागि खसुक्क निम्ता गर्‍याे । मलाई पनि सो कार्यक्रममा नछुटौं न त भन्ने लागेर लागें उकालो स्कुलतिर । तर म पुग्दा सरहरुले पिलेट पिलेटमा चिउरासँग मोलिसकेको दुःखद सूचना पाएपछि किन मुख देखाउन जानु भनेर यसो परको पसलमा बसिरहेको थिए । त्यहीँबाट स्कुुलको अफिसभित्रै हल्ला–खल्ला र हाँसोको झल्को कानमा पर्‍यो । त्यत्तिकैमा एकजना विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यलाई मनेरै पसलमा देखेर सोधें ए सदस्य ज्यू ! आज विद्यालयमा मिटिङ थियो कि क्या हो ? उनले मुख अमिलो पार्दै भने खोई के थाहा ? आफूँलाई त निम्तो गर्नै छाडे । मैले कुरो बुझिँहाले । उनलाई कुखुरो काट्ने समारोहमा समावेश गराइएन छ ।
एकछिन् पछि स्कुलका मास्टरहरु, एक जना अभिभावक, दुई जना विद्यालय समितिका सदस्य निस्किए, भूडिँ ढाडिएर । मैले मन नलाई नलाई अभिवादन ठोके । एकजना पसलबासी युवाले तितो पोखिहाले, ‘विद्यालयमा दैनिक कुखुरा काटेर सरहरुमात्र मिलेर खाईन्छकी कसो ?’ भालेको स्वाद चाखेका एकजना अभिभावकले जवाफ दिए, ‘तँ नकरा । किन सरहरुले कुखुराहरु खाए कुरा बुझ, त्यसै बोल्नु हुँदैन ।’ अर्का सदस्यले हो मा हो मिलाए । अघिल्लो साथीले थपे आज स्कुलमा नयाँ सरले नियुक्ति पाएको उपलक्ष्यको कुखुरा भोज हो । हाम्रो उपस्थिती विनाको भोज मलाई खल्लो लागे पनि थप कुरा गर्न उचित ठानेनौं तर, दुई दिनपछि मैले समाचार पाएँ कि ति समितिका सदस्यले विद्यालयबाट राजीनामा दिए रे ।
म चुकचुकाए । यदि हामी अस्ति सो भोजमा सहभागी हुन पाएको भए एकजना सदस्यलाई विद्यालयबाट राजीनामा गर्नबाट रोक्न सकिन्थ्यो कि । नभए त्यस्तै प्रकारको भोजको आयोजना गरेर राजीनामा थमौतीको प्रस्ताव गर्न पर्ला ।
हाम्रो देशको गाउँघरमा अझैसम्म पनि व्यवसायिक पशुपंक्षी पालनको व्यवस्था मिलाउन सकेको छैन सरकारले । जनताको चेतना उही पुरानो परम्परागत पशुपालन र खेती प्रणालीमा केन्द्रित छ । गाउँको गरिब तथा जनजाती र दलित जनताको आम्दानीको स्रोत लोकल कुखुरा पनि हुन् । जसलाई छोरीबेटीले, दाजुभाइलाई तिहारमा कोसेलीको रुपमा लान, छोरीबेटीलाई पेवाको रुपमा दिन, धामीझाँक्रीमार्फत् भुतप्रेत मनाउन कुखुरो पालन गरिन्छ । त्यसको बिक्रिको लागि प्रमुख खरिद कर्ता विद्यालयका शिक्षकहरु नै एक नम्बरमा पर्छन् । किनकी विद्यालयको पहुँच गाउँदेखि सहरसम्म र लेकदेखि बेसीसम्म छ ।
शिक्षकहरुले नेपाल सरकारको तलव खुरुखुरु थाप्ने र सुरुसुरु कुखुराको स्वाद जिब्रोमा नझुन्ड्याउने हो भने सहर बजारका पहुँचबाट टाढा रहेका जनताले पालेको कुखुरा सहरका मानिस वा रिसोर्टहरुले मात्र खाएर भ्याउदैनथिए र सहरमा अहिलेको जस्ते तेब्बर मूल्य पर्दैन थियो कि ?